गणेश भगवानको दर्शन गरी हेर्नुहोस् आज मङ्लबारको राशिफल ! – Sandesh Munch
July 28, 2020 104
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) हतारमा निर्णय लिँदा आफैलाई समस्या पर्न सक्ने तथा अरुको निम्ती प्रयोग भइनेछ । प्राकृतिक प्रकोप तथा बिपत्तिदेखि सावधान हुनुहोला समय मध्ययम रहेकोछ ।राजनीति तथा समाजसेवामा परिश्रम गरे अनुसार पद प्रतिष्ठा नपाइने हुनाले मन खिन्न हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा अरुदिन भन्दा ज्यादा समय खर्चिनु पर्नेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा समय लगानी गर्नेहरुले भनेजस्तो आम्दानी गर्न सक्नेछन् ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) माया प्रेममा एक अर्कालाई विश्वास गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । टाडाको आफन्तको निम्तो आउने तथा यात्रा पक्रिया अगाडि बढ्नेछ । बुद्धिको उपयोगले धन तथा भौतिक सम्पति लाभ हुनेछ । नयाँ नयाँ कामको प्रश्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरुले साध दिदा कामहरु समयमानै सम्पन्न हुनेछन् ।काम देखाएरै अरुको मन लोभ्याउन सकिनेछ भने सानो काम गरी मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा भनेजस्तो सुधा भएर जानेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) बोल्दा ख्याल गर्नुहोला बोलिको गलत अर्थ लगाई आलोचना गर्ने सक्रिय हुनेछन् । पढाइ लेखाइमा मन नजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ । प्राकृतिक प्रकोप तथा बिपत्तिदेखि सावधान हुनुहोला समय मध्ययम रहेकोछ ।समयमा काम गर्न सकिने भएपनि नतिजाको लागि केही समय कुर्नुनै पर्नेछ । आफन्त तथा कुटुम्बसँग अनावस्यक विषयमा विवाद हुने तथा टाढिनु पर्ने बाध्यता आउनेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) छिमेकि तथा समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।वन्द व्यापारबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ भने आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। आफन्त तथा साथिभाईहरुको सहयोगमा विशेष योजनाहरू बन्नेछन्।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) अल्छि गर्ने बानिले कामहरु बिग्रन सक्छ । अनावस्यक खर्च बढ्ने हुँदा दैनिक खर्च बढेर जानेछ । न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर समय ब्यातित गर्नुपर्दा अन्य काममा समय दिन सकिनेछैन । प्राकृतिक प्रकोप तथा बिपत्तिदेखि सावधान हुनुहोला समय मध्ययम रहेकोछ ।स्वदेशि सामानको उत्पादन तथा बिक्रि घट्न सक्छ भने विदेशि सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्या देखापर्न सक्ने तथा उपचार खर्च बढ्ने योग रहेको छ ।
Prevपर्समा यी ५ मध्ये एक चीज राख्नुहोस्: कहिलै हुँदैन् पैसाको कमी !
Nextराष्ट्रिय बीमा कम्पनीको मनपरीमा अर्थमन्त्रीको संरक्षण !
होसियार हुनुहोस् : सुतेको ठाउँमै मरिएला
मृत्यु सम्बन्धि पत्ता लागेको नयाँ अनौठा तथ्य हाम्रो आत्माको तौल कति हुन्छ?